OffLiberty, khuphela iividiyo ezinde kunye nomculo kwi-youtube kwi-MP4 okanye kwi-MP3 | Iindaba zeGajethi
YouTube Ibe ngokuhamba kwexesha yenye yeenkonzo zikaGoogle ezaziwa kakhulu kunye nendawo apho abasebenzisi abaninzi bonwabela uninzi lweevidiyo mihla le kwaye ngamanye amaxesha ngaphandle kokuphumla. Ukusuka kumculo, ukuya kwizahluko zoluhlu lwethu oluthandayo, ngeyona monologues ibalaseleyo kunye neevidiyo zezinye zezona zintanethi zidumileyo emhlabeni, Ezinye zezinto esinokuzibona, kodwa ngelishwa azigcini, ubuncinci ngendlela esemthethweni ukusukela ukufezekisa oku sinezixhobo zomntu wesithathu ezinje Ukukhululeka.
Kwaye iYouTube ayivumeli ngendlela ethe ngqo yokugcina iividiyo ezigcinwe kwiiseva zayo. Nangona kunjalo, namhlanje kukho iindlela ezininzi zamandla khuphela ividiyo ye-YouTube kwikhompyuter yethu, Ithebhulethi okanye i-smartphone ngendlela elula, ngaphandle kwengxaki kwaye ngendlela ekhawulezayo.
1 Ungazikhuphela njani iividiyo ezinde zeYouTube nge-OffLiberty
2 Khuphela iividiyo nge-EaseUS MobiMover Simahla
2.1 Khuphela iividiyo ngamanyathelo ama-2
Ungazikhuphela njani iividiyo ezinde zeYouTube nge Ukukhululeka
Ukukhululeka ligama lesixhobo esifuna ukuthetha nawe ngaso namhlanje kwaye ngaso Singalanda iividiyo zikaYouTube kwifomathi yeFLV okanye yeMP3, ngaphandle kokufaka nayiphi na inkqubo kwikhompyuter yethu. Esi sixhobo sinesibonelelo esikhulu sokuba sinokulawula yonke into kwiwebhu.
Kwindawo yokuqala, kufuneka singene kwi-OffLiberty, apho sinokubona into efanayo, kunye nenani elikhulu leempapasho, kwinto ebonakala kulo mfanekiso ulandelayo;
Ngoku nokukhuphela nayiphi na ividiyo ekufuneka siyenzile faka i-URL efanayo, nangona kwiimeko ezininzi oku kungahlali kunika iziphumo ekujoliswe kuzo. Ukwenza oku, kungcono ukuthatha idilesi esiyifumana kwividiyo nganye ukuze sabelane ngayo, ebekwe nje ngezantsi kwenkcazo kwaye ecaleni kweenketho ze "Shumeka" kunye ne "imeyile". Kwimeko apho ungazi ukuba ungayifumana phi le URL kumfanekiso olandelayo siza kukucacisela ngokweenkcukacha (ungabona amanyathelo ekufuneka elandelwe abomvu);
Ngokukhawuleza ukuba sinedilesi ekhutshelweyo kufuneka siyise kwi-OffLiberty kwaye cinezela iqhosha elicimayo. Inkqubo yokukhuphela iya kuqala kwakamsinya nje ukuba sicinezele elo qhosha kwaye siza kubona into enjalo.
Inketho yokuqala sisandi sevidiyo esiza kukhuphela ngokukhawuleza kwaye okwesibini yividiyo epheleleyo eya kuthatha ixesha elide. Ukuba ividiyo iyure enye, musa ukuphelelwa lithemba kuba kuya kuthatha ixesha elide ukukhuphela ngokupheleleyo.
Njengoko besesitshilo kuxhomekeke kubude bevidiyo kuya kufuneka silinde ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi, kodwa kwiimeko ezininzi kwimizuzwana embalwa okanye ubuninzi bemizuzu siya kuba nayo ividiyo esifuna ukuyilanda. Nje ukuba inkqubo yokukhuphela igqityiwe siza kubona into efana nale iboniswe kumfanekiso olandelayo;
Ukugqiba inkqubo yokukhuphela nayiphi na ividiyo ye-YouTube kwi-OffLiberty kufuneka sikhethe ifomathi esiyifunayo, kwi-MP3 yokukhuphela kuphela isandi okanye iVidiyo yokukhuphela ividiyo kunye nesandi esifakiwe. Kuxhomekeke kwifolda odibanise kuyo nokukhuphela kwisikhangeli sakho, ifayile iya kwindawo enye okanye kwenye.
Ngaphandle kwamathandabuzo amathuba anikezelwa yi-OffLiberty anomdla kakhulu Kwaye kukuba kumaxesha amaninzi besifuna ukukhuphela ividiyo ye-YouTube ukuze sikwazi ukuyigcina ngonaphakade. Ukongeza, kwimeko yam ndisebenzise esi sixhobo amaxesha amaninzi ukukhuphela iingoma ukuze ndizimamele kwikhompyuter yam, nangona ngaphezulu kwako konke ndiye ndasisebenzisa ukugcina iingoma ezibukhoma okanye iikonsathi ezigqityiweyo ezirekhodwa ngabantu abaninzi ngeefowuni eziphathwayo emva koko baxhoma inkonzo. Google.
Ewe akukho mntu unokukholelwa ukuba le kuphela kwendlela yokukhuphela iividiyo okanye iifayile zeaudiyo kwiYouTube, kuba zininzi ngakumbi, nangona le yeyona ndlela ilungileyo yokukhuphela ividiyo kwinkonzo zikaGoogle. Ukuba ufuna ukwazi ezinye iindlela, ungaphoswa Isikhokelo sokukhuphela iividiyo zeYouTube nakwesiphi na isixhobo.
Ngaba ukhe wasebenzisa i-OffLyberty ukuya Ukukhuphela iividiyo ezinde zikaYouTube?. Ukuba impendulo nguewe, sixelele ngamava akho ngesi sixhobo. Ukongeza, singathanda ukuba usixelele ukuba zeziphi ezinye iinkonzo okanye izixhobo ozisebenzisayo ukukhuphela iividiyo zeYouTube. Ungasitshela kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule posi okanye ngenye yeenethiwekhi zentlalo apho sikhona.
Khuphela iividiyo nge-EaseUS MobiMover Simahla
Olunye ukhetho olunomdla lokukhuphela iividiyo nakwesiphi na isixhobo kwaye nakweyiphi na indawo kukusebenzisa i-EaseUS MobiMover yasimahla, enamandla Ukukhuphela ividiyo mahala onokuyisebenzisa kuzo zombini iiWindows kunye neMac kwaye ukhuphele kwaye ugqithise iividiyo ngokulula nangokufanelekileyo.
Khuphela iividiyo ngamanyathelo ama-2
Inyathelo 1: Cofa kwimenyu Isikhupheli seVidiyo kwibar ye-tab kunye khetha isixhobo ofuna ukukhuphela iividiyo kuso.
Isinyathelo se2: Ngenisa i-URL yevidiyo ufuna ukukhuphela kwaye ucofe kwiqhosha lokukhuphela. Nje ukuba ucofe kulaa qhosha, isoftware iya kuqala ukukhuphela ividiyo oyibonisileyo kwaye iyigqithisele kwisixhobo osikhethileyo, nokuba yi-smartphone yakho, icwecwe okanye ikhompyutha enye oyisebenzisayo.
Ukuba uyazi ezinye iindlela zokukhuphela iividiyo zikaYouTube, sishiyele inkcazo ngenye indlela oyikhethileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » OffLiberty, khuphela iividiyo ezinde kwi-youtube
Ngaba simahla ngaphandle kwenkululeko?
ayisebenzi kum offlberty ndingayenza njani into ehlekisayo
Kude kube sekuphumeni kwelanga
Ayisasebenzi, ngaba iya kuhlawula?
AKUSENAKUSEBENZA NJENGAPHAMBI KWAYO ...
eneneni ayisebenzi kwakhona okwenzekileyo
Kwenzeka ntoni ngefiss
luis h lopez sitsho
Kuhle kakhulu, siyathemba ukuba uya kuqhubeka uyihlaziya, enkosi
Phendula luis h lopez
Edin zuñiga sitsho
Edin Zuñiga… Enkosi ngesixhobo esihle kangaka sokukhuphela iividiyo
Phendula uEdin Zuñiga
Ndine-iPhone 6 .. andazi ukuba umculo okhutshelweyo ugcinwa phi
Khuphela umphathi wefayile kwaye uya kuyifumana apho
Ixesha le-Ami k ayizukushiya i-flexita oyinike yona kwaye ibuyele ekuziphatheni njengasekuqaleni kodwa ayibambi ukukhuphela umculo ukuba ngubani owaziyo ukuba kwenzekile?
Molo, mva kwemini entle, ndingathanda ukwazi ukuba kutheni iphepha lingandivumeli ukuba ndikhuphele nayiphi na ingoma, ndikopa i-url kwaye ayindivumeli ukuba ndikhuphele, ithi izame kwakhona kwaye ayishiyi, bendinje iintsuku ezininzi
Kubonakala kum ukuba iYouTube yenze uhlengahlengiso kwezokhuseleko, kunye noyilo, kwaye ikhuphe ezinye iiwebhusayithi zokukhuphela umxholo wayo, kubandakanya neOffliberty.
UMBUZO YI-LINK XQ QUIET ANDINAKHO UKUKHUPHELA UMCULO OMNINZI KUNYE NENKONZO
KUBONAKALA KUM INKQUBO YOKUQHUBA, KODWA NDITHATHA IIVEKI EZIMBALWA XA INGANDIVUMELI NDIBHALISE IINGOMA OKANYE IIVIDIYO. NDINGAKUTHANDA UKUZE undinike isisombululo.
NOKUBA UTHANDA KUNYE.
Inkqubo khange isebenze kum iiveki ezimbalwa kutheni ungaphenduli kwizimvo?
Le yi-imeyile evela kwinkonzo yezobuchwephesha engafumanekiyo: umnxeba@offliberty.com
Sinolwazi kunye newebhusayithi yokufundisa, asinanto yakwenza nenkampani elawula le webhusayithi.
Ukuba inkqubo ilungile kodwa ziintsuku apho ndingakwaziyo ukukhuphela umculo, siyintoni isizathu? Enkosi kakhulu
uthini ngokungakhathali– akusasebenzi….
Kuthekani ngenkqubo, ayisandivumeli ukuba ndikhuphele nantoni na. umntu othile uyazi enye indlela yokukhuphela kumxube wecloud
Ileidys montero chacon sitsho
Inkxalabo yam yile ilandelayo eyenzekayo sisicelo esingakhange sisebenze iiveki ezimbini kwaye ndibone isizathu kuba kubonakala kulungile kakhulu ukubona esiphi isisombululo enkosi kakhulu
Phendula i-leidys montero chacon
Nceda iphepha alisebenzi kwaye kuhle ukuba sidinga uncedo ...
Sele iiveki ezininzi okoko indivumele ndikhuphele umculo okanye iividiyo, oku kuya kuqhubeka nokwenza nceda. Phendula
UErica yamila sitsho
Molo, igama lam ndinguYamila, andikwazi ukukhuphela umculo, kwenzeka ntoni kuba andikwazi ukukhuphela umculo?
Phendula u-Erica yamila
I-Exlente ikhawuleza kakhulu
UHenry Quezada sitsho
mva kwemini ndifuna ukwazi ukuba kwenzeke ntoni ngale nkqubo kwaye ayiphenduli konke konke akukho ndlela yokukhuphela umculo kwaye le nkqubo yayiyeyona ilungileyo ukuza kuthi ga ngoku undincede ngempendulo enkosi….
Phendula kuHenry Quezada
Iphepha elidlulayo alisebenzi
Awusakwazi ukukhuphela umculo?
Ndiyathemba ukuba banokuwulungisa lo mbandela ... bayazi ngelinye iphepha ukukhuphela umculo
Yayiyinkqubo ebalaseleyo, kodwa phantse kunyaka ophelileyo iyekile ukukhuphela nantoni na. Ihlazo lokwenyani, kuba yayiyeyona nto ibalaseleyo xa kwakufika kwiinkqubo zokukhuphela.
UNicasio Sanoja Palma sitsho
Enkosi ngobomi nasekuziphatheni okubi kwabo bandinike yonke into.
Phendula kuNicasio Sanoja Palma
Ndiyayisebenzisa le nkqubo, kodwa ngamanye amaxesha ndibeka idilesi yomculo othile kwaye indixelela ukuba i-url ayisebenzi okwethutyana: Ndifuna ukukhuphela iingoma kwiirekhodi ze-abora okanye ukuphakamisa iziqendu kuphela. Ngamanye amaxesha kukuthatha ityhubhu iintsuku ezininzi ukubeka iividiyo nakwamanye amaphepha oku kuqala, kodwa ndinengxaki yokungabi nanto.
I-Twitter ayisayiphakamisi intloko